On: २०७७ आश्विन १३ गते, मंगलवार, ०६:३१ बजे प्रकाशित
जवाफदेहिता निगरानी समितिले डा गोविन्द केसीका मागको विषयमा तत्काल वार्ताबाट समाधान खोज्न अपिल गरेको छ। समितिका संयोजक चरण प्रसाईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा डा केसीको मागका विषयमा समाधान खोजी उहाँको जीवन रक्षाका लागि अविलम्ब पहल गर्न सरकारसँग अपिल गरेको छ। चिकित्सक डा केसीले नेपालको स्वास्थ्य–शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, विगतमा सरकारले गरेको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनजस्ता मागका सम्बोधन गर्न समितिले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “डा केसीले ज्यान जोखिममा राखेर थाल्नुभएको सत्याग्रह कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नभएर शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, राज्यको सामाजिक न्यायको दायित्व, चुस्त व्यवस्थापन, सुशासन तथा विगतमा सरकार र उहाँबीच भएको सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि हो।” डा केसीलाई जुम्लाबाट काठमाडौँ स्थानान्तरण गरी नेसनल ट्रमा सेन्टरमा राखिएको छ।
कपिलबस्तुमा डा‍ केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै युवाहरूले थाले प्रदर्शन
चिकित्सा क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पहुँच र सुधारको माग गर्दै आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। डा. गोविन्द केसी समर्थन समूहको आयोजनामा कपिलवस्तुकाे वाणगङ्गा नगरपालिकाको जितपुर चौकमा सोमबार बिहान ८ बजेदेखि युवाहरूले शान्तिपूर्वक धर्ना तथा प्रदर्शन सुरु गरेका हुन्। अनशनरत डा. केसीको अवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रिदै गएको भन्दै युवा विद्यार्थीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
धर्ना कार्यक्रमकाे २० जना युवाले सामूहिक नेतृत्व गरेका छन्। सरकारले डा. केसीको जीवन रक्षाको ग्यारेन्टी नगर्दासम्म धर्ना तथा प्रदर्शन दैनिक रुपमा सञ्चालन गरिने आन्दोलनरत अगुवा युवा चन्द्रकान्त पोख्रेलले बताए। युवाहरूको धर्ना तथा प्रदर्शनप्रति स्थानीय विभिन्न संघ संस्थाहरूले समेत ऐक्यवद्धता जनाएका छन्।
२०७७ आश्विन १३ गते, मंगलवार, ०६:३१ बजे प्रकाशित